Shina 100% Ny fanamboarana kapoaka vita amin'ny voajanahary vita amin'ny voajanahary Gianty
Volavoloina volotsangana volafotsy sy hazo
Azo alaina kitapom-bokatra
100% vita amin'ny voavidy vita an-tsambo 100%
Ny kitapom-borona vita soa aman-tsara dia safidy voalohany sy tokana voajanahary azo avy amin'ny akorandriaka voamarina sy havaozina. Tsara tarehy sy mafy orina izy io. Ny valizy vita amin'ny cutlery 100% izay mifanaraka amin'ny fotoana rehetra.
Vary vita amin'ny volotsangana voajanahary madio ny antsy volotsangana. Volavola akora azo havaozina indrindra manerantany. Vinavinaina sy noforonina maharitra. Apetraho tsara ny sangan'asan'ny voajanahary, ny tsirony ary ny traikefa amin'ny fanamboarana volotsangana volotsangana. Mipetraka am-pilaminana eo am-pelatanana ireo atody vita amin'ny volontany tsara tarehy ary milentika tsara ao anaty fampisehoana tsy misy plastika. Ny tena asa ho an'ny tanimbary, amin'ny fety sakafo sy ny hetsika, eny amin'ny toerana misy ny toby ary mandritra ny fety sy ny fety zaridaina. Tsy vitan'ny mihinana gilasy amin'ny mofomamy, mofomamy, fa ny sakafo any andrefana ihany koa toy ny mofomamy sy salady. Ny cutlery 100% vita amin'ny kapoaka dia safidy tsara ho an'ny avo lenta, lamaody ary tontolo iainana.
Ny Forest Stewardship Council (FSC), dia fikambanana tsy mitady tombony izay mametraka fenitra ambony sasany hahamarina fa ny ala dia mampihatra amin'ny fomba manana andraikitra ara-tontolo iainana sy mahasoa. Raha vokatra iray no antsoina hoe "FSC Certified," dia midika izany fa ny hazo nampiasaina teo amin'ny vokatra sy ny mpanamboatra izay nahatonga azy io dia nahafeno ny fepetra takian'ny Filan-kevitra momba ny Ala.
Ny fanamarinana FSC dia raisina ho toy ny "fenitra volamena" ho an'ny hazo voajinja avy amin'ireo ala izay tantanina, mandray soa, mahasoa amin'ny lafiny ara-tsosialy, mahatsiaro tena ara-tontolo iainana ary azo antoka ara-toekarena.
• FSC voamarina
• tsara kokoa
• fitaovana azo havaozina
• Safidy fanamboarana milamina sy azo atao, mahasoa sy milamina ho an'ny piknik, birao na fisakafoanana manaraka, hetsika manokana, fampakaram-bady, na trano fisakafoanana na trano fisakafoanana.
• Matetika ao anaty trano an-trano sy compost ara-barotra
• biodegrade fa tsy mandoto na manimba ny tontolo iainana
Item Vavaky volontany
Isan'ny carton 1000 pcs
Ny entana isaky ny fonosana 100 pcs
Fonosana isaky ny baoritra 10 fonosana
Haben'ny baoritra 22 * 18 * 19cm
Item Fork Bambodia
Haben'ny baoritra 25 * 18 * 23cm
Haben'ny baoritra 24 * 18 * 26cm
Previous: Orinasa nanamboatra sombin-tariby 4 tapa-kitapo - CPLA Kitapom-bidy vita amin'ny plastika tsy misy afa-tsy - Kitapo azo antoka - Gianty
Manaraka: Birchwood FSC voaova voajanahary azo havaozina
Birchwood FSC voajanahary azo havaozina azo alaina ...